i-Airbnb Associates - uAirbnb
Bhatalwa ngokuxelela abanye indlela okuthanda ngayo ukuhamba
Joyina inkqubo Yoonozakuzaku bakwa-Airbnb uze wenze imali xa usazisa abanye ngeendawo zokuhlala nezinto ezinokonwatyelwa kuAirbnb. Kukho imimiselo
Yenza iilinki kwiwebhusayithi yakho okanye usebenzisa amacebiso ethu okuzakhela amaphepha akho ohambo-akuyomfuneko yokuba usebenzise i-HTML.
Yabelana nabantu ojolise kubo
Bonisa iindawo zokuhlala nezinto ezinokwenziwa ngabanye ngokuzifaka kwiwebhusayithi yakho okanye kwiakhawunti yakho yejelo lonxibelelwano.
Qalisa ukwenza imali
Xa umntu ebhukisha kuAirbnb esebenzisa into yakho, uza kufumana i-30% yemali emele ibhatalwe lundwendwe luka-Airbnb xa undwendwe sele luphumile ne-25% yemali ebhatalwa umbuki zindwendwe ka-Airbnb ngezinto ezinokonwatyelwa ezigqityiweyo. Funda okungakumbi
Indlela yokwabelana ngezinto
Yenza iilinki ezikhethekileyo ukuze wenze iindawo zokuhlala okanye izinto ezinokonwatyelwa ofuna ukuzincomela zibe phambili.
Faka iiwijethi ezikhethekileyo kwiwebhusayithi yakho enezindlu ezithile okanye eneebhokisi zokukhangela eziqhelekileyo.
Yenza amaphepha ohambo
Khetha kwiithemplethi ezicingisiswe kakuhle xa bezisenziwa ukuze wenze awakho amaphepha.
Yahluka ngokusebenzisa iithempleyithi
Yenza izinto ezingohambo obonisa ngazo ezihambelana nendlela ofuna bazibone ngayo abantu ojolise kubo. Izinto obonisa ngazo zenze zikhetheke, uzenze zibonwe ngabanye uze uzilawule usebenzisa izixhobo zokulungisa ezikhoyo.
Sebenzisa imephu ukubonisa iindawo zokuhlala nezinto ezinokonwatyelwa ezikufutshane neendawo ezibangel' umdla.
Xelela nabanye ngeendawo zokuhlala okanye izinto ezinokonwatyelwa ozibhukishileyo okanye ozigcinileyo xa ubukhangela.
Ibhokisi yokukhangela ka-Airbnb
Yenza kube lula kubantu ojolise kubo ukuba bazikhangelele.
Nokuba ungumphembeleli, umbuki zindwendwe wakwa-Airbnb, usebenza ngemveliso okanye uthanda nje ukwabelana ngamathuba ohambo olungenakulibaleka, kusenokwenzeka uyafaneleka.
Wenza iindawo ezithandwayo zibonakale ngathi akukazange kwayiwa kuzo. Abaphulaphuli bakho balindele iipowusti zakho, izinto ozithandayo nokukhankanywa.
Ukuthanda ngentliziyo yakho yonke ukuhamba yaye ungumbalisi wamabali wemvelo othanda ukwabelana ngezinto ezinokonwatyelwa ezikhethekileyo ezisemhlabeni wonke.
Ubuchule bakho bunceda abantu abavela emhlabeni wonke bafumane amathuba ohambo angasoze alibaleke.
Ababuki zindwendwe bakwa-Airbnb
Ungoyena mntu wazi kakuhle ukuba yintoni eyenza uAirbnb akhetheke ibe kungokwemvelo kuwe ukunceda abahambi balonwabele uhambo lwabo.
Jonga ezi mpendulo zemibuzo eqhele ukubuzwa uze uhlole iinkcukacha zale nkqubo Kwiziko Loncedo.
Kuza kwenzeka ntoni ukuba umntu ubhukisha indawo yokuhlala okanye into enokonwatyelwa eyahlukileyo kuleyo bendimchazela ngayo?
Uza kufumana imali ngako nakuphi na ukubhukisha okufanelekayo okwenziwe lundwendwe, ukuba nje undwendwe lungene kuAirbnb ngelinki yakho ibe ukubhukisha kuyayifikelela eminye imiqathango yenkqubo.
Umntu unexesha elingakanani lokuba abhukishe emva kokucofa into yam?
Kuza kufuneka babhukishe indawo yokuhlala zingekapheli iintsuku eziyi-28 nento enokonwatyelwa zingekapheli iintsuku eziyi-14 ukuze ufumane imali ongayisebenzisa koku kubhukisha. Uza kufumana imali xa begqibile ukuhlala okanye ukwenza into enokonwatyelwa.
Kuza kwenzeka ntoni ukuba umntu ubhukisha emva kokucofa iilinki zoonozakuzaku abaninzi?
Ilinki yokugqibela kanozakuzaku undwendwe oluyicofileyo ngaphambi kokubhukisha yiyo eza kufumana imali enokusetyenziswa.
Njengombuki zindwendwe wakwa-Airbnb, ndingayifumana na imali endinokuyisebenzisa yeendawo zokuhlala nezinto ezinokonwatyelwa endingumbuki zindwendwe wazo?
Ababuki zindwendwe baka-Airbnb banokufumana imali abangayisebenzisa ngokuxelela abanye ngezinto ezinokonwatyelwa nangeendawo zokuhlala, kuquka indawo yokuhlala okanye into enokonwatyelwa kwindlu yabo.
Ndiza kwenza ingeniso engakanani?
Njengonozakuzaku, uza kubhatalwa i-30% yemali emele ibhatalwe lundwendwe luka-Airbnb qho umntu ebhukisha indawo aze azihlale zonke ezo ntsuku esebenzisa into yakho, ibe uza kubhatalwa i-25% yemali ebhatalwa umbuki zindwendwe ka-Airbnb qho umntu ebhukisha aze agqibe ukwenza into enokonwatyelwa (kwi-intanethi okanye aye ubuqu) esebenzisa into yakho. Yiya kwiziko loncedo ujonge nemimiselo ukuze ubone imiqathango eyongezelelekileyo.
Ukulungele ukuqalisa ukwenza ingeniso njengoNozakuzaku wakwa-Airbnb?